. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း
ကျမက တော်တော်ကြောက်တတ်ပါတယ် .. ကြောက်တဲ့အရာတွေကလည်း ခပ်များများရယ် .. သရဲဆိုလည်းကြောက် .. အကောင်ဗလောင်ဆိုလည်းကြောက် .. ရန်ကုန်မှာမိုးရွာလို့ တီကောင်တွေမြင်ရင်တောင်ကြောက်တတ်တယ် .. ပိုးဟပ်မြင်ပြီဆိုလည်း ဘယ်နားပြေးရှောင်ရမှန်းကမသိ .. ကိုယ်ကပြေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘာဓါတ်လဲမသိဘူး .. ပိုးဟပ်က ကိုယ်ပြေးတဲ့ဘက်လိုက်ပြေးတာလည်း အခေါက်တိုင်း .. ကိုယ်ကကြောက်လို့ လွတ်တဲ့ဘက်ပြေး .. သူကကြောက်လို့ကိုယ့်ဘက်လိုက်ပြေး အိုး ရှုပ်ရှက်ကိုခပ်နေတာ .. တယောက်တည်းနဲ့ .. အကောင်ဆို သေးသေးလေးကအစ အကြီးကြီးထိကြောက်တယ် .. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတော့ မကြောက်တတ်ဘူး .. ချစ်ချင်တဲ့အချိန်ချစ်တယ် .. (စိတ်က အစိုးမရတာလေ ..) ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချိန် ကိုယ်စိတ်ကြည်နေတဲ့အချိန်ဆို ကြောင်တွေခွေးတွေကို ပွတ်သီးပွတ်သတ်လုပ်သလောက် စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုလည်း ဖြစ်ညစ်တတ်သေးတယ် ..
သရဲဆိုတာကိုတော့ဘာလို့ရယ်မသိဘူး .. တွေးတွေးပြီးကိုကြောက်တာ .. မေကြီးကပြောတယ် .. သမီးအရင်က မကြောက်တတ်ပါဘူးတဲ့ .. ဟုတ်တယ် အရင်က မကြောက်တတ်ဘူး .. ခုနောက်ပိုင်းမှကြောက်တတ်လာတာ .. ရန်ကုန်မှာတုန်းက သူငယ်ချင်းတယောက်က အမြဲတမ်းသရဲကားယူယူလာတယ် .. အဲဒါကို ကြည့်ကြည့်ပြီး နောက်ပိုင်းကြောက်တတ်သွားတာ ..
သူယူလာတာ သရဲကားက နိုင်ငံပေါင်းစုံက .. တခြားသူငယ်ချင်းတွေကလည်းပေးတယ် .. ဂျပန်သရဲကားတွေရော ကိုရီးယားသရဲကားတွေရော .. သူတို့ကြည့်တော့ ကိုယ်လည်းကြည့်ချင်တာပေါ့ .. ကြည့်ပြီးရင် ရေမချိုးရဲဘူး .. ရေချိုးခန်းဝမှာ တယောက်ကိုစောင့်ခိုင်းပြီး အထဲက တချိန်လုံးအော်နေတာ .. အဲလိုသတ္တိကကောင်းတယ် ..
သရဲတွေကလည်း ခြောက်ပုံခြောက်နည်းကအစုံ .. ရေထဲကထွက်လာလိုက် .. ဓါတ်လှေကားကထွက်လာလိုက် .. ရေပန်းက သွေးတွေကျလိုကျ .. ဟင်း .. ကြည့်ပြီး တွေးတွေးကြောက်တာ .. မျက်နှာသစ်နေတုန်း မျက်လုံးလဲဖွင့်လိုက်ရော ကိုယ့်မျက်နှာရှေ့တည့်တည့်မှာ ကိုယ့်ကိုရီပြီးကြည့်နေမလား .. မှန်ကြည့်တုန်း ကိုယ့်နောက်က ပေါ်လာမလား .. ကုတင်အောက်ပဲရောက်နေမလား .. ကြောက်လိုက်ရတာ .. တရေးနိုး ကုတင်အောက် ခြေထောက်တောင် မချရဲဘူး .. မဖြစ်မနေထရရင်လည်း ခြင်ထောင်ထဲ အမြန်ဒိုင်ဗင်ပစ်ဝင်တာ .. အဲလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကမေးတယ် .. နင်က အခြောက်ခံဘူးလို့လားတဲ့ .. အခြောက်သာခံရရင် ငါ့ကိုဒီလိုတောင်မြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ် .. သတ္တိကောင်းပုံများ .. :P
ငမန်းကား မိကျောင်းကားတွေကိုလည်းသိပ်ကြိုက်တာ .. ကြည့်ပြီးတွေးကြောက်တာပဲ .. အုတ်ကန်ထဲ ရေခွက်နဲ့ရေခပ်နေတုန်း ဘွားဆိုပေါ်လာမလား .. ကိုယ့်လက်ကိုပဲ လှမ်းဆွဲမလား .. တွေးမိတော့လည်းရီချင်တယ် .. :D တကယ်က အိမ်က အုတ်ကန်ကဖြင့် သေးသေးလေး ..
လူသတ်များကြည့်ပြီးရင်တော့ သွေးသံရဲရဲတွေကို အိမ်မက်ထဲထိမြင်ပြီး ကောင်းကောင်းအိပ်လို့မရ .. အဲဒီလူသတ်ကားနေရာမှာလဲ ၀င်ပြီးခံစားလိုက်သေးတယ် .. ကိုယ့်နောက်က လိုက်လို့ ပြေးပြေး .. ပုန်းစရာနေရာရတော့ ကိုယ်ကပုန်းနေတာပေါ့ .. လူသတ်သမားကြီးက ခြေသံပေးပြီးလျှောက်လာ .. ကိုယ့်ဘက်ကို သူကမမြင် .. ကိုယ်က စိတ်ချရပြီထင်တော့မှ သူက ကိုယ့်ဘက်ကို ဗြုန်းကနဲလှည့်ကြည့် .. အိုး တွေးတွေးကြောက်လိုက်ရတာ အစုံပါပဲ ..
ဒါတွေအကုန် အတုတွေအစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသိကြီးနဲ့လည်း တွေးကြောက်တာပဲ .. သေချာတွေးမိရင်တော့ ရီရတယ် .. တကယ် တယောက်တည်းနေရပြီဆိုရင်တော့ ရေချိုးခန်းထဲတောင်မ၀င်ရဲဘူး .. :P
အင်္ဂလိပ်ကားမပြောနဲ့ ကိုယ့်မြန်မာပြည်က မြန်မာမင်းသားမင်းသမီးတွေ မြင်နေကျလူတွေရိုက်တဲ့သရဲကားတွေတောင် သေချာမကြည့်ရဲဘူး .. သရဲဆိုတာနဲ့ စိတ်က အလိုလို ကြောက်စိတ်ဖြစ်မိနေတာဖြစ်မယ် .. ကိုယ်သာ မကြည့်ရဲတာ ရှေ့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ သိပ်သိချင် .. လူ့စိတ်များခက်လိုက်တာ .. ရှေ့လျှောက်လည်း ဆက်ကြောက်နေမိဦးမယ်ထင်တယ် .. သရဲကား လူသတ်ကားလည်း ကြုံရင်ကြုံသလို ကြည့်မိနေဦးမှာ .. တယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူး .. အဖော်ကောင်းရင် .. :D
ရေးသားသူ moekhar at 4/22/2009 05:53:00 PM
အကြောင်းအရာခွဲ ဖြစ်သမျှအလွဲများ, ဟိုရောက် ဒီရောက်
တို့ကတော့ လူလိမ္မာ အလုပ်ပဲလုပ်တယ်
မကြည့်ဘူး (ကြောက်တတ်လို့) ဟီးဟီး
မဟာဗန္ဓုလရဲ့ သွေး ၉၉% ပါသားပဲ ..
အဖော်ပါရင် အာကာသထိတောင် လိုက်မဲ့သဘော။
ကောင်းပီ အဖော်လုပ်ပြီး သရဲကားကြည့်မယ်
ကြောက်လိုက်တာတော့.......... ဗြဲဟဲဟဲ... :P အဟေးဟေး
၀ါးးးး ၀ါးးးးးး ဖြဲချောက်တာ ကြောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ ကျနော်ကတော့ ကြောက်တတ်ပါဘူး ဘာဆို ဘာမှ မကြောက် အမလေး လုပ်ပါဦး ရှေ့မှာ တီကောင် (စတာ တကယ် မကြောက်ဘူး)
မမ ကတော့ အကောင်ပလောင်ပါတဲ့ ရုပ်ရှင်ဆို ဘာမှ မကြည့် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိလို့၊ ကိုယ်ချင်းစာ၏
ပရိတ်သတ်ရဲ့ အထာကို သိတော့ ထုတ်လုပ်သူတွေက
သရဲကား စုန်းကား လူသတ်ကား တွေကို သေချာရိုက်
ကြတယ် ပိုက်ဆံတွေ သဲ့ ယူကြတယ်
နိုင်ငံခြားစာကြည့်တိုက်တွေမှာ ဗွီဒီယိုခွေငှားရင် ၁၈ နှစ်
အောက် မကြည့်ရတဲ့ ကားတွေအပြင် စာကြည့်တိုက်ကဒ် တွေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတယ်
မမမိုးခါးရယ် ကျနော့်လိုသာ ဆယ်ထပ်မှာ ၁ယောက်တည်း နေရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
အခန်းဖော်ကလည်း လာချင်မှလာတယ်။ ဘေးမှာ ကပ်ရပ်ကလည်း ၁ ခန်းတည်းပဲ ရှိတယ်။
ပြူတင်းပေါက်က လှမ်းကြည့်ရင် high school အခန်းတွေက မီးလုံး ပြာပြာ လေးတွေပဲ မြင်ရတယ်။
သရဲ မမြင်ဖူးတော့ မြင်ဖူးချင်ရဲ့။ ကိုရီးယားကားထဲလို သရဲမ ချောချောလေးနဲ့သာ တွေ့ရရင် သူ့လက်မှာ သေဆို သေပျော်ပါတယ်။ :P
မမမိုးခါးရယ်.. အနော်ကတော့ သူရဲကားဆို ကြည့်တောင် ကြည့်ဘူး
တစ်ခါ နှစ်ခါလားပဲ ကြည့်ဖူး၏..
မှတ်ထားရမယ်။ သရဲ ဖြစ်လို့ကတော့လား လာကို ခြောက်ဦးမယ်။ ဟီးဟီး။ :D
အဲမှာ ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ အဒေါ်ကြီးတဲ့ အမေကြီးအရွယ်ပါ တော်တော်တော့ကြီးပြီ.............
အဲတာနဲ့မော့ကြည့်လိုက်တော့ လားလား.......... ကတ္တရာလမ်းမပေါ်မှာ စန့်စန့်ကြီးလဲနေတာလဲ သူပဲ
ပြောစကားလဲနားမထောင်၊တော်တော်လဲဆိုးတယ်တဲ့ အတြာကြောင့်သူက အတြာတွေတောင်းတဲ့ကောင်တွေဆို လည်ပင်းညစ်ချင်တာတဲ့..............
နော်ကတော့လဲ ကျင့်သားရသွားတော့ အိုကေပါတယ်
၀ူး ထွား ဟား ဟား.. သရဲခြောက်တယ်ကွ.. ကြောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ အနိုင်လာကျင့်တာ.. :D
တီတီတို့ကတော့ ကြောက်ပါတယ်ဆိုမှ သူ့အမေနွေးကိုလွှတ်ဦးမယ်.. မနိုင်ဘူး.. မနိုင်ဘူး.. :D
တီတို့ တော်တော်ရက်စက်တယ် ..း(
မကြောက်ပါနဲ့ ဟဲဟဲ ခါး၂ရေ အလည်လာပြီးစာဖတ်သွားပါတယ်ရှင်...
ဟားဟားဟား... ဖြစ်ရလေ ငါ့အမရေ...း) မကြောက်ပါနဲ့... မောင်ရှိပါတယ်.. ဟိဟိ
မိုးခါးက ကြောက်တဲ့ ခံစားမှုကို သဘောကျနေလို့ ဖြစ်မှာပါ..။ အင်းလေ.. ကြောက်ချင်လို့ကို သရဲကားကြည့်တာပေါ့နော်.. ဟုတ်ဖူးလား။ သရဲကားတွေကိုတော့ သဘောမကျဘူး.. Ghost လို ကားမျိုးတော့ မပါဘူးနော်.. Casper လေးကိုရော မချစ်ဘူးလား မိုးခါးရဲ့..။
ခေါင်းအုံးထဲကနေ ထွက်လာတဲ့ သရဲ ကားလည်း ရှိသေးတယ် မ ..။ မ ဒီနေ့ ည အိပ်ရင် ခေါင်းအုံး ကို သေချာ စစ်ပြီးမှ အိပ်နော် ..။ အဟိ ..>>>
ကြောက်တတ်တယ်ဆိုတော့ ဒုက္ခပဲ။ ကျနော်က သရဲဝတ္ထုရေးမလို့။ :)
I also visited to your blog.
သရဲလာခြောက်ပါတယ်။ မိုးခါးရည်... လင့်ထားရင် ခွင့်ပြုမှာလား..
ဟုတ်တယ် ညီမလေးရေ။ သရဲကားတွေက လူကို ပိုကြောက်တတ်အောင် လုပ်သလိုပဲ။ အစ်မတော့ အနောက်နိုင်ငံက သရဲကားတွေထက် အာရှက သရဲကားတွေကို ပိုကြောက်မိတယ်။ ကိုယ်ကြားဖူးနေကျ သရဲဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ပိုနီးစပ်တော့ တကယ်ကြီးလို ပိုထင်မိလို့ ထင်ပါရဲ့...
မိုးခါးလေးက ကြောက်တတ်တယ်ပေါ့လေ..။ အပြင်မှာတွေ့လို့က တော့ ခြောက်ဖြစ်အောင်ကို ခြောက်အုံးမှာ..။